स्मार्ट लाइसेन्स लिन कुर्दाकुर्दै हैरान ? नेपालमै भित्रियो स्मार्टकार्ड बनाउने प्रविधि - Muglan News
ताजा खबर सुचना प्रविधी
स्मार्ट लाइसेन्स लिन कुर्दाकुर्दै हैरान ? नेपालमै भित्रियो स्मार्टकार्ड बनाउने प्रविधि
२०७५ जेष्ठ १२, शनिबार ०४:२२ May 26, 2018 Muglan News	0 Comments
काठमाडौं, ११ जेठ – तपाईंले सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि कति समय कुर्नुभयो ? पक्कै पनि नौ महिना वा वर्षदिनभरि कुर्नुभयो होला ।
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने योजना अगाडि सारे पनि प्रविधिको अभावमा लामो समयदेखि अनुमतिपत्रका लागि प्रतीक्षा गरिरहनु परेको छ ।
नेपालका आफ्नै प्रविधिको अभावमा त्यसखालको समस्या भोग्नुपरेको भन्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अब्बल विश्वप्रसिद्ध अमेरिकन कम्पनी जेब्राको सहयोगमा मालिका इन्कर्पोरेट कम्पनीले सवारी साधानको अनुमतिपत्र लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रविधि नेपालमा भित्र्याएको छ ।
सूचना प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्रिय महत्वका सूचना संकलन तथा सम्पादनका क्षेत्रमा अग्रेणी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्मार्ट सवारी साधन अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा रहेका ११ लाख सवारी धनीलाई तीन महिनाभित्रै नेपालमा नै उपलब्ध गराउन सकिने मालिका इन्कर्पोरेट कम्पनीका अध्यक्ष टीकाराम जोशीले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष जोशीले नेपालको हरेक क्षेत्रलाई कागजरहित बनाउने लक्ष्यका साथ आफूहरुले अमेरिकन प्रविधि नेपालमा भित्र्याएको जानकारी दिए ।
यस्तै लालपूर्जा, सवारी साधन दर्ता पुस्तिकालाई समेत स्मार्ट बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य सेवालाई समेत सहज, सरल बनाउनका लागि स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।
यस्तो प्रविधिले ट्राफिक प्रहरीले सहजै अनुमतिपत्रको अध्ययन गर्ने, जरिवानाका लागि बलि काट्ने प्रविधि पनि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले वितरण गर्ने मतदाता परिचयपत्रलाई समेत स्मार्ट बनाउन सकिनेछ भने राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत नेपालभित्रै छाप्न सकिने मालिका इन्कर्पोरेटले जनाएको छ ।
यस्तै विद्यार्थी परिचयपत्रलाई समेत स्मार्ट बनाउन सकिने सो कम्पनीले जनाएको छ । विद्यार्थी विद्यालय गए वा गएनन्, कति समय विद्यालयमा बसेजस्ता सामान्य सूचनासमेत मोबाइल एप्लिकेशनमार्फत अभिभावकलाई जानकारी दिन सकिनेछ ।
आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रविधिको सही प्रयोग गरेर मानव जीवनलाई थप सहज र सरल बनाउन सकिने बताए ।
वर्तमान सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान शुरु गरेको भन्दै उनले यस्ता प्रविधिले त्यसमा साथ दिने र नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण आधार खडा गर्ने बताए ।
नेता शर्माले एक्काइसौँ शताब्दी प्रविधिको युग भएकाले नेपालले पनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
हरेक क्षेत्रमा लाइन नै बस्नुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि हामीले पछिल्ला प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
कार्यक्रममा जेब्रा कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि अतुल मिश्रले प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी सहज जीवनशैली अपनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
नेपालमै पहिलोपटक च्याउको लागि चाहिने परालको डल्ला…
एम्बुलेन्स कुर्दाकुर्दै मृत्यु !
स्मार्ट लाइसेन्सको चिप्स उप्किन थाल्यो
स्मार्ट बन्दै भेडेटारका होटल, बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा…
नेपालमै पहिलो पटक !!! अब १ रुपैयाँमै सामसंग जे सेभेन…
भुडी लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब येसरी घरमै बसेर…
← सारा नेपाली रुहाउने समाचार सवारी दुर्घटनामा परी ९५ को मृत्यु
अत्यधिक वर्षापछिको बाढी र डुबानले श्रीलंकामा १६ को मृत्यु, हजाराैं विस्थापित →
डा. गोबिन्द केशी अनशनमा बस्दै, कहिले हेर्नुहोस- प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली
२०७४ फाल्गुन ३०, बुधबार ०३:४७ March 14, 2018 Muglan News 0
चिकित्सकले नै झारफुक गर्न तान्त्रिक बोलाउँदा बिरामीको मृत्यु
२०७४ चैत्र २, शुक्रबार ०१:४४ March 16, 2018 Muglan News 0
युएई आउने कामदारका लागि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य , कसरी बनाउने रिपोर्ट पुरा हेर्नुहोस
२०७४ माघ २४, बुधबार १७:१३ February 7, 2018 Muglan News 0
Spread the love 132 Viewsकाठमाडौं : नेपाल आइडल सिजन– ३ का विजेताहरूको विश्व भ्रमण तय भएको छ। सिजन ३ को अडिसन